Shiinaha Dukaanka Dukaanka Dukaanka DG1015 oo wata 3 Wareegyo Wareeg ah & Soo saaraha Boorsada Cawrada la saari karo iyo alaab-qeybiye | Duoduo
Baabuurka DuoDuo ee DG1015 oo wata 3 Wareegyo Wareeg ah & Boorsada Cawrada laga saari karo
Cabbirka furmay: 49x37x101CM
Cabbirka Dambiilaha: 32x29x39.5CM
Cabbirka la laabay: 37x21x94CM
Xirmo: 8pcs halkii kartoon
Cabbirka kartoonka: 87x42x56CM
Kani waa jaranjarooyinka lagu fuulo gawaarida wax iibsiga, waa la laaban karaa oo boorso, qabatooyin iyo xadhig laastik ah leh, dambiilaha waxaa laga soo qaadi karaa salka gaariga, waxaa loo isticmaali karaa xaalado kala duwan. Gacanka waxaa loo isticmaali karaa laba siyaabood oo kala duwan. Waa mid khafiif ah oo waxtar badan leh inta lagu jiro nolol maalmeedkaaga.
Naqshadeynta jaranjarooyinka fudud: Saddex taayir oo si gaar ah loogu talagalay awoodda jaranjarada jaranjarada. Gawaarida ayaa kor iyo hoosba u duulaya tallaabooyin fudeyd leh. Giraangiradu waxay ku fiican yihiin berriga sida dhoobada, doogga, jaranjarooyinka, dhagaxyada dhagaxa ah, shubka, iyo quruurux. Giraangiraha hore waa giraangiraha guud, 360 darajo si fudud ayaa loo rogi karaa.
Gawaarida wax iibsiga ee loo adeegsan karo jirku: Khariidadda gawaarida wax iibsiga waa la burburin karaa iyadoo alaabada waaweyn iyo kuwa culusba si fudud loogu qaadayo. Saldhigga gaadhigii korontada ayaa sidoo kale isku laaban u oggolaanaya in gaadhigu qaato meel yar inta la keydinayo.
Waxyaabo badan ayaa adeegsada gawaarida duuban ee duuban: Gaarigan korantada waxaa loo isticmaali karaa xaalado kala duwan oo aan dhammaad laheyn sida ka adeegashada suuqyada beeraleyda, suuqyada, raashinka, kaamam, dhacdooyinka cayaaraha iyo suuqyada. Trolley-kan waxaa sidoo kale loo isticmaali karaa qaadista dharka iyo ka soo qaadista dharka dharka lagu dhaqo iyo howlaha ka socda magaalada. Waxaa ku jira hal xarig oo loogu talagalay xamuul waaweyn oo culus. waxayna qaadi kartaa 110lbs oo culeys ah marka aad alaabada jiidaneyso.
Gawaarida gawaarida gawaarida gawaarida gawaarida gawaarida: Qalabka loo yaqaan 'Collodion handle' wuxuu heystaa xajin raaxo leh oo kaa caawinaya inaad si sahal ah kor ugu kacdo oo aan leex leexan markaad jaranjarada fuuleyso. Gawaarida wax iibsiga oo leh 35L awood ballaaran ayaa lagu rakibi karaa biyo, khudrad, saliid la cuni karo iyo wixii la mid ah. Qaab dhismeedka aluminium qaro weyn leh iyo shabaq labalaab ah ayaa ka dhigaya gaadhiga wax iibsiga inuu leeyahay muuqaal wanaagsan oo xoojinaya culeyska Giraangiraha dunta lagu hagaajiyay si adag uma dhacayaan.
Hore: Trolley Restaurant Makhaayadaha DuoDuo CC-S3S / CC-S3L 3 Kaar rooga Heerka
Xiga: Baabuurka DuoDuo ee Dukaameysiga DG1026 / DG1027 oo leh 360 ° Wareegyo Wareeg ah
Gawaarida Gawaarida Dheeraadka ah
Gawaarida Dukaammada La Laban Karo ee Wheels
Quful Gawaarida Dukaameysiga
Gawaarida Dukaamaysan ee La Qaadan Karo Oo Wata Shaagado
Dukaameysiga Dadka Waayeelka ah
Gawaarida Dukaameysiga ee Jaranjarada
Baabuur Dukaameysi leh Kursi
Gawaarida Dukaameysiga oo leh Wareegyo Wareeg ah
Gawaarida Gawaarida Dukaameysiga oo leh Wado
Laba Gaari oo Dukaan iibsi ah
Gawaarida Gawaarida Gawaarida Gawaarida ah ee HC150B / 250B Fla ...
Tarooli shandadaha isku laabma DoDuo DX3015 Lightweig ...
DuoDuo Dolly-WG8006 Duty culus caaga Dolly wi ...
DuoDuo Flat-panel cart HC500S Dolly laabidda fol ...